नेपाल आज | ओलीले केही महिनामै आश्चर्य पार्ने कुनै काम गरे भने अचम्म नमान्दा हुन्छ !
ओलीले केही महिनामै आश्चर्य पार्ने कुनै काम गरे भने अचम्म नमान्दा हुन्छ !
बुधबार, १५ साउन २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री आफै कस्सिएर सम्भावित बासस्थान, विमानस्थल, बाटो र सुरक्षा खतराबारे चासो दिइरहनुभएको छ । फलतः केही महिनाभित्रै देशवासीलाई आश्चर्यमा पार्ने त्यस्तो कुनै काम भएछ भने अचम्म नमान्दा हुन्छ ! आम अनुमानभन्दा फरक किसिमका विदेशी पाहुनाले नेपाल टेक्ने अवस्था आउँदैछ । कुनै ठूलै विपद् वा महामारी भएन भने नेपालको इतिहासमा अनि नै महत्व राख्ने घटनाक्रम हुन लागेको हो ।
यदि प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो कुटनीतिक संयन्त्रले कुशलतापूर्वक सघायो भने दुई ढुंगाबीचको तरुलरुपी नेपालले उत्तर र दक्षिणका सर्वोच्च व्यक्तिलाई स्वागत गर्ने मौका पाउँदैछ । यो कामका लागि प्रधानमन्त्री आफैंले मन्त्री र कर्मचारीलाई अनुगमन तथा निर्देशन दिइरहनुभएको छ । र, यसका निम्ति मंगलबारदेखि घनिभूत तयारी शुरु भएको छ । सिंनामंगलतिरका झारपात उखेल्न थालिएको छ ।
यस्तो कुदाकुदबीच सम्भवतः दसैंको सेरोफेरो देशले दुई विदेशी पाहुनालाई स्वागत गर्दैछ । यसका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समग्र वस्तुस्थिति अध्ययन भइरहेको छ । भिभिआइपी मुभेन्टकाका कारण कमर्सियल उडानहरुलाई पर्ने असरको वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न विमानस्थलका महाप्रवबन्धक राजकुमार क्षेत्रीलाई पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवार हुनुको नाताले प्रधानमन्त्रीले विशेष निर्देशन दिइसक्नु भएको छ ।
पाहुनालाई बोलाउन त बोलाएने तर तिनलाई राख्न भारतमा जस्तो राष्ट्रपति भवन र चीनमा जस्तो राजकीय अतिथिगृह (दियाओयुथाइ) छैनन् हामीकहाँ । ८ घण्टाको निम्ति मात्रै भए पनि तत्कालिन निनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ जसता पाहुना आए तिनलाई हात–मुख धुन र कपडा फेर्न विश्रामगृह त चाहियो ।
विकल्पको रुपमा भरपर्दा होटलहरु छन्–छैनन्? सडकहरुमा पिच, खाल्डाखुल्डीको अवस्था कस्तो छ? त्यतिबेलासम्म नारायणहिटी अगाडि शेष घलेको होटला बनिसक्ला कि नसक्ला ? यस्ता पक्षमा पर्यटन व्यवसायीहरुसँग सोधपुछ गर्नसमेत प्रधानमन्त्री आफैं कस्रििहनुभएको छ, ‘म सिंगापुरबाट फर्केर आउँदासम्म सबै तयारी सकिएको हुनुपर्छ ।’
एरफोर्स वन लिएर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम नै पो आउँदैछन् कि भन्ने खालको सुरक्षा सतर्कता र गोपनियता अपनाइँदैछ । नेताहरुको व्यक्तिगत नाफा–नोक्सानको हिसाबकिताव निकाल्दै शीतलनिवास र सिंहदरबारको दक्षिणी गेटसामुन्ने माफियाहरुलाई होटल–अपार्टमेन्ट खोल्न दिँदा आज कत्रो समस्या छ । यो समाचार आजको जनआस्था साप्ताहिकबाट लिइएको हो ।